यूट्यूबबाट कसरी पैसा कमाउने ? – तहल्काखबर
यूट्यूबबाट कसरी पैसा कमाउने ?
काठमाण्डौं / धेरै अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई ‘धेरै नेट नचला है’ भनेर गाली गर्छन्। यसको आशय इन्टरनेट चलाएर आफ्नो उत्पादनशील समय खेर गएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। इन्टरनेट चलाएर सबै युवा आफ्नो सिर्जनशीलता घटाइरहेका छन् त ? आश्चर्य लाग्न सक्छ, युवा पुस्ता कला देखाएर इन्टरनेटबाटै मनग्गे कमाउन पनि थालेका छन्।
कुनै समय संगीत कति हिट भयो भनेर क्यासेट बिक्रीलाई आधार बनाइन्थ्यो। गायक र सर्जकले निश्चित रोयल्टी पाउँथे। कम्पनीले नाफा कमाउँथे। अहिले जमाना फेरिएको छ। श्रव्य क्यासेट, सीडी, सीआरबीटी हुँदै संगीत व्यवसाय युट्युबमा केन्द्रित छ।
मोरङका कृष्ण उदासको आफ्नै युट्युब च्यानल छ। उनले आफ्ना सिर्जना युट्युबबाटै सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। ‘प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दा सामान्य मान्छेले पनि कला प्रस्फुटन गरेर आम्दानी गर्न सक्दो रहेछ’, उनले भने। उनी युट्युबबाटै मासिक चार सय अमेरिकी डलर कमाइरहेका छन्।
उनका दुई युट्युुब च्यानल छन्। फलैँचा इन्टरटेनमेन्ट र फलैँचा इन्फोटेनमेन्ट। फलैँचा इन्टरटेनमेन्ट चलाएको एक वर्ष भयो। अहिले यसको सब्सक्राइबर्स ३५ हजार छन्। आधा दर्जनभन्दा बढी भिडियो लाखभन्दा बढीले हेरेको उनले बताए। जागिरबाट जस्तै युट्युबबाट नियमित पैसा पाइरहेको उनले सुनाए।
युट्युबको मनिटाइजेसन प्रविधिले अस्तित्व संकटमा परेका सर्जकको जीवनलाई पुनर्जागृत गरेको कलाकार पुरुषोत्तम रिजाल बताउँछन्। मोबाइलमा मेमोरी कार्ड राखेर गीत सुन्ने समय थियो। यसले सर्जकहरूले एल्बम निकालेर कमाइ गर्ने अवस्था थिएन। पाँच वर्ष अगाडिको अनुभव सुनाउँछन् रिजाल, ‘फित्तावाला चक्कापछि सीडी आयो। मोबाइल कार्डले व्यापारलाई ह्याम्पर गर्‍यो। एल्बम निकाल्नै कम भयो। म्युजिक कम्पनीको अस्तित्व समाप्तजस्तै भयो।’
उनले पाँच वर्षअघि खोलेको भाइस क्रिएसनको एक लाख सब्स्क्राइब्स पुगिसक्यो। आफ्ना अधिकांश गीत, म्युजिक एल्बम यसैबाट सार्वजनिक गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘सिंगरले युट्युब च्यानलले लामो कन्टेन्टलाई प्राथमिकतामा पार्छ। दुई घण्टा, तीन घण्टाको भिडियोलाई विज्ञापन दिन्छ।’
युट्युबबाट मासिक औसत डेढ लाख रुपैयाँजस्तो कमाइ हुने गरेको उनले बताए। भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि त्यसलाई मनिटाइज गर्न आफ्नो च्यानलमा कम्तीमा १० हजार भ्युज हुनु आवश्यक छ, यसका साथै आफू  युट्युब पार्टनर प्रोग्रामसँग पनि जोडिनुपर्छ ।
जब आफ्नो च्यानलमा १० हजार ‘युज’ पु‍ग्छ, तब युट्युबले तपाईंको भिडियो आफ्नो नीतिअन्तर्गत छ कि छैन भनेर जाँच्छ । सबै कुरा ठीक छ भने तपाईं युट्युब पार्टनर बन्नुहुनेछ भने तपाईंका भिडियोहरूमा विज्ञापन आउन थाल्छन्  ।
कसरी कमाइ हुन्छ युट्युबबाट ?
युट्युबमा गएर नयाँ च्यानल बनाउनुहोस् र भिडियोहरू राख्नुहोस्। भिडियो चोरेर भने राख्नु हुँदैन । त्यसो गरे प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनका कारण तपाईंको भिडियो त युट्युबबाट हट्छ नै, तपाईंको च्यानल नै प्रतिबन्धित हुने सम्भावनासमेत हुन्छ । बरु तपाईंले कुनै निश्चित विषयसँग सम्बन्धित रहेर नियमित रूपमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ । स्मार्टफोनको स्मार्ट जमानामा अहिले तपाईंलाई भिडियो बनाउन त्यति गाह्रो पनि नपर्ला ।
भिडियो बनाउँदा दर्शकको रुचिलाई ध्यान दिनुहोस्, दर्शक कस्ता प्रकारका भिडियो रुचाउँछन् भन्ने कुरा अध्ययन गरेर त्यही रुचि समेट्ने गरी भिडियो बनाइयो भने नियमित रूपमा राम्रो दर्शक संख्या पाउन सकिन्छ ।
यसरी सेटअप गर्नुहोस्, युट्युब च्यानल बनाएर युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा जोडिन आवेदन दिनुपर्छ । याद गर्नुहास्, युट्युब पार्टनर प्रोग्रामको रिभ्यु हुन आफ्नो च्यानलको भिडियो लाइफटाइममै कम्तीमा १० हजारपटक हेरिएको हुनुपर्नेछ ।
युट्युब पार्टनर प्रोग्राम हाल नेपाललगायत विश्वका केही देशमा उपलब्ध नभएकाले च्यानल लोकेसनमा युट्युब पार्टनर प्रोग्राम हुन उपयुक्त देश छान्नुपर्ने हुन्छ ।
च्यानलमा विज्ञापन आएर मनिटाइज भएको भिडियोबाट कमाउन युट्युब च्यानललाई एडसेन्स एकाउन्टसँग कनेक्ट गराउनुपर्छ । यति गरेपछि मनिटाइज विथ एड्स छानेर कस्तो प्रकारको विज्ञापन राख्ने हो छान्नुपर्छ। यो कामका लागि भिडियो म्यानेजरको युट्युब स्टुडियो एपमा जानुपर्ने हुन्छ । अब नियमित रूपमा भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ।
युट्युबमा खोज्दा आफूले तयार पारेको भिडियो तुरुन्तै फेला पर्नुपर्छ  । कुन शब्द खोजेर दर्शकहरू आफ्नो च्यानलमा आइरहेका छन्, त्यहीअनुसार भिडियोको टाइटल (शीर्षक) तथा डिसक्रिप्सन राख्दा पनि धेरै दर्शकले चाँडै फेला पार्ने भिडियो दिन सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक बढाउन गुगलको ट्रान्सलेसन टुल प्रयोग गरेर भिडियोमा विभिन्न भाषामा शीर्षक एवं डिसक्रिप्सन राख्न सकिन्छ । युट्युब आफैंमा पनि एउटा ठूलो सर्च इन्जिन हो । राम्रो डिसक्रिप्सन लेखेर युट्युबको सर्चमा अगाडि आउन सकिन्छ ।
भिडियो युट्युबमा राख्दा थम्बनेल र आकर्षक शीर्षक राख्नुपर्छ । भिडियोको थम्बनेल र शीर्षकले नै दर्शकलाई भिडियो हेरौं कि नहेरौं भनेर निक्र्योल गर्न मद्दत गर्छ । एकपटक आएका दर्शकलाई आफ्नो च्यानलमा लामो समयसम्म टिकाउन प्ले लिस्ट बनाउन सकिन्छ । यसले आफ्नो च्यानलको लोकप्रियता बढाउन थप सहयोग गर्छ ।
← नेपाली आत्मसम्मानको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई : प्रधानमन्त्री ओली
सांस्कृतिक संवाहक पृथ्वीनाराण शाह →